Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Berbera Masuul Ay Mahadisay Bulshadii Oommanayd. Q 3aad. Cabdifatax Cali Faarax.
Monday January 06, 2020 - 19:35:14 in Wararka by Super Admin
Shaqsiga haya xil-dawladeed oo hawlbowle ah, isla markaana leh, aqoon, khibrad shaqo, firfircooni dhalinyaronimo iyo daacadnimo leh, waxa uu Hayadda uu qaranka uga wakiil yahay ka dhigaa mid tisqaada, oo umaddu mahadiso adeegga ay u bulshada u qabato.
Sidaas daraadeed Akhristee waxa sunne wanaagsan ah, in masuulka xilka uu dawlada ka hayo sidii la rabay uga soo baxa in lagu boggaadiyo shaqada wanaagsan iyo adeegyada uu dadkiisa gaadhsiiyey, waxana kamid ah masuuliyiinta bulshaddu mahadisay ee kamidka ah Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi, Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Berbera Eng. Saleebaan Cabdi Looliya, oo ah masuul meesha ka saaray dhaliishii Xukuumada uga iman jirtay bulshada Gobolka Saaxil ee dhinaca Biyaha.